सरकारले आफ्नो पार्टीमाथि लगाएको प्रतिवन्ध गलत ः विप्लव – Rajya TV
सरकारले आफ्नो पार्टीमाथि लगाएको प्रतिवन्ध गलत ः विप्लव
कपिलवस्तु,२४ फागुन ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले सरकारले आफ्नो पार्टीमाथि लगाएको प्रतिवन्ध गलत भएको बताउनु भएको छ ।
न्यायको पक्षमा लडाइँ गर्दा प्रतिबन्ध भोग्नु परेको उहाँले बताउनु भयो ।
कपिलवस्तुको शिवगढीमा सोमबार पार्टी निकट अनेमसंघ क्रान्तिकारीको सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाले समाजको अन्याय, अत्याचार र दमनका विरुद्ध लडेको आफ्नो पार्टीमाथि लगाएको प्रतिवन्ध र दमन सही नभएको बताउनु भयो । कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव विप्लबले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको आलोचना गर्नु भयो ।
उहाले भन्नू भयो ‘बम टेक्दै र हतियार खोस्दै हिँड्न सकिन्छ । न्यायको पक्षमा हामी कहिल्यै दब्नु हुँदैन । हामीले गल्ति गरेका छैनौ’, उहाले महिलाले सम्पतिमा समान अधिकार नपाएसम्म मुक्ति नपाउने पनि बताउनु भयो । न्यायको पक्षमा लाग्दा जनतामा जानै नदिन सरकारले आफूहरुलाई प्रतिवन्ध लगाएको विप्लवले दावी गर्नु भयो ।
उहाले प्रचण्ड र बाबुरामहरूले न्याय र समानताको मुद्दा बिर्सेकाले उनीहरु धुलोपिठो भएको पनि टिप्पणी गर्नु भयो । ‘आज प्रचण्डजी कहाँ पुग्नुभयो ? प्रचण्ड र बाबुरामले गलत बाटो लिए । मन्त्री त हामी पनि हुनसक्थ्यौँ । सहिद परिवार, वेपत्ता, किसान मजदुर बिर्सिए ।
‘गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार गर्ने, बलात्कार गर्नेहरुलाई कारवाही गर्नु गल्ती हो ? भन्दै प्रश्न गर्नु भयो। ‘लडाइँ भयो भने क्षति हुन्छ भन्ने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर दास भएर मर्नुभन्दा लडेर मर्नु धेरै ठुलो कुरा हो,’ विप्लवले अझैपनि अन्यायका विरुद्ध प्रतिवाद गर्ने संकेत गर्नु भयो।
सरकारले आफूहरुलाई प्रतिवन्ध लगाएको दुई महिनाभित्र सखाप पार्छौँ भनेर भनेपनि त्यो सत्य र न्यायका लागि लडेकाले नै सरकार असफल भएको विप्लबको भनाइ रहेको छ